abatyali-Japanese crypto kumelana phezulu ku 55% tax enzuzweni - Blockchain News
abatyali-Japanese crypto kumelana phezulu ku 55% tax enzuzweni
Agency Tax National yaseJapan ngonyaka ophelileyo ukuba inzuzo kwi abathengisa cryptocurrency na uhlobo “imali yezinto ngezinto,” abatyali-zimali ngoku kufuneka baxele iingeniso zabo imvuthuluka irhafu yonyaka ngenxa Feb. 16-EyoKwindla 15.
Ngokungafaniyo lokuwina kwi ezitokisini kunye nemali angaphandle, zazo irhafu ngeenxa 20 ekhulwini, irhafu yaseJapan enzuzweni imali virtual isebenza ukusuka 15 angu 55 ekhulwini. Imali phezulu usebenza kubantu neholo lonyaka 40 million yen ($365,000).
Ekubeni kungekho capital gains tax kwi investment zexesha elide imali virtual kwezinye izindawo kuquka Singapore, neqaqobana abatyali cryptocurrency-izityebi abasele besishiyile Japan, wathi Kengo Maekawa, elilawulayo eliyintloko Shiodome Partners Tax Corp.
Isakhono ingeniso ayagu- ukuba urhulumente Japanese kungaba ezibalulekileyo. Kwiinyanga nje malunga 40 ekhulwini zonke Trading Bitcoin ibe nxamnye yen.
Ngeli xesha, -arhente yerhafu ukudala isiseko data kwi abatyali-mali kunye namaqela ezisekelwe eTokyo ne Osaka cryptocurrency ukuba nokugcina urhwebo silindile electronic.
Mastercard isebenzisa blockchain ukulwa ID ezingamanga
A pa esanda kupapashwa ...
Post Previous:wezeziMali ZaseThailand: Urhulumente uza ukuvala urhwebo cryptocurrency
Post Next:Cryptocurrency exchange BitGrail ibhengeza amatyala emva lomnqweno yimfumba